Ahoana no fahazoana alalana fitetezam-paritany? efi-efijery efijery fanamoriana fizahana e-Fanjakana | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Ahoana no fahazoana alalana fitetezam-paritany? efi-efijery efijery fizahana fizahana e-Fanjakana
19 / 05 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, ANKAPOBENY, Airports, Highway, Tire Wheel Systems, Headline, TORKIA
Ahoana no fahazoana alalana fitetezam-paritany? e-Government Screen Fahazoan-dàlana fandehanana: Inona no ilainao hahazoana fahazoan-dàlana amin'ny fitsangatsanganana? Iza no mahazo ny antontan-taratasy fitsidihana Travel Permit?
Iza no mety mahazo trafika PERMIT?
Ny minisiteran'ny atitany dia nandefa faribolana fanampiny ho an'ireo governora, nanisy ferana ny famerana ny fidirana amin'ny fiara. Ao anatin'ilay faribolana, izay ahitana fomban-draharaha momba ny fampiharana, ny olona afaka mahazo fahazoan-dàlana amin'ny fitsangatsanganana dia voatanisa toy izao manaraka izao:
Ireo izay navotsotra avy ao amin'ny hopitaly izay itondrana azy ary te hiverina any amin'ny fonenany, izay resaky ny tatitry ny dokotera na efa nahazo fanendrena sy fifehezan'ny dokotera.
Ireo izay handeha hitsidika ny fandevenana ny tenany na ny vadiny, havany voalohany izay maty, na ny rahalahiny.
Ireo izay hiaraka amin'ny famindrana fandevenana, raha toa ka tsy mihoatra ny olona 4 izy ireo, afa-tsy ireo manana antony mahafaty.
Ireo te-hamita ny asan'ny miaramila ary hiverina any amin'ny toeram-ponenany.
Ireo izay nasaina hanao fifanekena manokana na tsy miankina amin'ny besinimaro.
Ireo izay navotsotra tamin'ny andrim-panjakana sazy
Taorian'ny nivoahany avy tany ampitan-dranomasina, ny vanimpotoana natao nandritra ny 14 andro sy ny fanaraha-maso any amin'ny toerana asehon'ny banky na Hostels Institution izay nametrahana azy ireo.
Ny fahazoan-dàlana dia voafetra amin'ny isan'ireo mpandeha amin'ny fiara tsy miankina.
Ampiharo amin'ny alàlan'ny vavahadin'ny vavahadin'ny e-governemanta.
SORATY ETO HANADINOANA DOKUMENTO TRAVEL
Fanamarihana momba ny fanangonana: Fividianana karazan-tsarimihetsika Smart Stop Stop
Fikambanana Ski Ski Yakutiye amin'ny TRT Screen
Fampitandremana ho an'ny mpamily avy ao amin'ny City Screen | Ankara
Fahazoan-dàlana ho an'ireo mozika mpihira manao mozika amin'ny metro fiara ao Ankara
Fitsaboana tsy misy fepetra isan-taona no novana!
Minisitry ny Fahazoandàlana Fitaterana Fitaterana